ကုန်ကြမ်း Dolastatin 10 (110417-88-4) HPLC≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း / Dolastatin 10 (110417-88-4)
SKU: 110417-88-4. အမျိုးအစား: R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Dolastatin 10 (CAS 110417-88-4) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Dolastatin 10 ကဗီဒီယို
I.Dolastatin 10 အခြေခံဇာတ်ကောင်:
အမည်: Dolastatin 10
မော်လီကျူးအလေးချိန်: 785.09g / mol
သိုလှောင်မှုကို Temp: တစ်ဦးအေးမြခြောက်သွေ့သောအရပ်နှင့်0မှာ Store မှာ -4℃တိုတောင်းသောသက်တမ်း (ရက်ရက်သတ္တပတ်မှ) သို့မဟုတ်ရေရှည်များအတွက် -57 ℃ (နှစ်လကြာ)
အရောင်: Off-အဖြူ sollid မှအဖြူ
II ကို။ antitumor သံသရာအတွက် Dolastatin 10 (110417-88-4) အသုံးပြုမှု
2.Dolastatin 10 အသုံးပြုမှု:
ရည်ရွယ်ချက်: ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အဆင့်မြင့်ရင်သားကင်ဆာနှင့်အတူလူနာအတွက် dolastatin-10 ဝတ္ထု Anti-microtubule အေးဂျင့်များ၏ထိရောက်မှုနှင့်အဆိပ်စုံစမ်းစစ်ဆေး။
နည်းလမ်းများ: တိုင်းတာသွားကြောင်းရင်သားကင်ဆာနှင့်အတူနှစျဆယျ့တစျလူနာသွေးကြောသွင်း bolus အားဖြင့် 10 mcg / m400 တစ်ထိုးတစ်ကြိမ်2ရက်သတ္တပတ်မှာ dolastatin-3 နဲ့ကုသခံခဲ့ရသည်။
ရလဒ်များ: 21 လူနာထဲကတစ်ခုမှာ (5%; 95% CI: 0-24%) 113 ရက်ပေါင်းတစ်ကြာချိန်များအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလွှတ်အောင်မြင်။ လေးလူနာ 87 ရက်ပေါင်းတစ်ဦးပျမ်းမျှအဘို့အတည်ငြိမ်ရောဂါထိန်းသိမ်း။ လူနာ dolastatin-10 နှစ်ခုသံသရာတစ်ဦးပျမ်းမျှရရှိခဲ့သည်။ Hematologic အဆိပ် 8 လူနာတန်း4neutropenia နှင့်အတူတန်း5neutropenia နှင့်3ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်အတူ, အလယ်အလတ်ရှိ၏ တဦးတည်းတန်း3febrile neutropenia လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တန်း3နှင့်4neutropenia ဤဖြစ်စဉ်များကုသမှုသံသရာ၏ 36% အပေါ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ non-hematologic အဆိပ်ဆန်းခဲ့ပါတယ်။
နိဂုံး: dolastatin-10 ၏အဆိပ်အတောက်ပရိုဖိုင်းကိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်ခဲ့ပေမယ့်, ဒီအဆင့်မြင့်ရင်သားကင်ဆာလေ့လာမှုမှာအနည်းငယ်မျှသာလှုပ်ရှားမှုရှိခဲ့ပါတယ်။
စသည်တို့အတွက်: Dolastatin 10 ပင်လယ်ကိုယုန် Dolabella auricularia ကနေခွဲထုတ်တစ်မူထူးခြားတဲ့ pentapeptide ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလားတူဆန့်ကျင်သောဤအတွက်စသည်တို့ဒေတာ 10-50-10-5 μg / mL (10-6-10-2 nm) ၏ GI10 တန်ဖိုးများရှိပါတယ်တစ်ခုချင်းစီ၏ Dolastatin3နှင့် Auristatin PE မြားမှအတော်လေးနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ကြောင်း founds ဖြစ်ပါသည် လူ့ဆဲလ်လိုင်းများ minipanel ။ အဆိုပါ antibody ကိုမူးယစ်ဆေးဝါး conjugation (ADC ကို) ကိုဆန့်ကျင် CD30 monoclonal antibody ကို cAC10 အဆိုပါ cytotoxic အေးဂျင့် monomethyl auristatin အီး (MMAE), အ tubulin polymerization inhibitor Dolastatin 10 (110417-88-4) ၏ဒြပ် Analog စဖို့ conjugated ပါဝင်သည်။
Dolastatin3အပေါ် 10.Warning
Dolastatin 10 ပေါင်းစပ်
Dolastatin 10 (110417-88-4) ၏စုစုပေါင်းပေါင်းစပ်နှစ်ခု key ကိုအမိုင်နိုအက်ဆစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထိရောက်ပေါင်းစပ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲခွငျးအားဖွငျ့ Dil (6) နှင့် DAP (11) ပြီးစီးခဲ့, နှင့် C-terminal ကို Doe ကနေငါးအမိုင်နိုအက်ဆစ်အစိတ်အပိုင်းများနောက်ဆက်တွဲ stepwise နားချင်းဆက်မှီခဲ့သည် ။
ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဘေးထွက်ကြိုးပေါ်မှာ Heteroatoms ပါဝင်တဲ့ Dolastatin 10 Analogues ၏အကဲဖြတ်။
သဘာဝ 10 dolastatin ဖြစ်ပေါ်၏ဒြပ် Analogues ကြောင့် antibody ကိုမူးယစ်ဆေး conjugation (ADCs) တွင်သယ်ဆောင်မှုဝန်ချိန်အဖြစ်စသည်တို့လှုပ်ရှားမှုနှင့်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုမှာသူတို့ရဲ့အစွမ်းထက်ဖို့ကင်ဆာ၌ကြီးသောအကျိုးစီးပွားဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ dolastatin 10 core ကိုငြမ်း၏ပြုပြင်မွမ်းမံအဓိကအားဖြင့် P1, N-terminus ၏ပြုပြင်မွမ်းမံအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်း, P5 C-terminus, အ P2 subunit မှအနည်းငယ်မျှသာအာရုံစိုက်မှုနှင့်အတူသိရသည်။
ဆယ်လူလာ assay ခုနှစ်, Dolastatin 10 (110417-88-4) 3nM ထံမှ 50nM အထိ IC0.1 တန်ဖိုးများနှင့်အတူအချို့သောလူ့သွေးကင်ဆာ, lymphoma နှင့် (ထိုကဲ့သို့သော OVCAR-10 နှင့် NSCLC ကဲ့သို့) အစိုင်အခဲအကျိတ်ဆဲလ်လိုင်းများဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုပြသထားတယ်။ ဒါဟာလက်ရှိလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
III ကို။ Dolastatin 10 (110417-88-4) HCML
IV ။ AASraw ထံမှ Dolastatin 10 ဝယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Ticagrelor အမှုန့် (274693-27-5)
Febuxostat အမှုန့် (144060-53-7)